Nhoroondo yeSPIEL muEssen: "Makumi emakore ekushanda nesimba" - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 11, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, GAME muEssen, Events
Iyo nyaya yekuseri kweSPIEL muEssen yakareba, angangoita makore makumi mana apfuura kubva pakatanga chiitiko ichi, chaizivikanwa seMazuva eVatambi veGerman. Nhasi mazuva emitambo yepasirese ndiwo maratidziro makuru epasi rose emitambo yebhodhi. Ongororo yezvakaitika kare inoratidza kuti zvakawanda zvachinja. Chii chaizvo? Kana paine anoda kuziva, ndiDominique Metzler. Takabvunza tichitenderera.
Mazuva emitambo yepasirese anoitika gore rega - pasi pezita rinoshanduka - muEssen, iyo yaionekwa seyakagadzika kusvika 2020. Denda re coronavirus rakakanganisa nhevedzano, uye kudzoka kwacho kwakapembererwa gore rakatevera. Kune vatambi vepaparlor, horo dzekuratidzira dzeEssen dzave chinhu senge imba yekutandarira. Gore rega rega muna Gumiguru kune chakasarudzika kune vakawanda: iyo SPIEL. Unogona kuvimba nazvo. Iyo Friedhelm Merz Verlag muBonn yakabatana zvakanyanya nemazuva emitambo yenyika uye yagara iri murongi weiyo fair yakatanga sechiitiko chevaverengi chakazara.
SPIEL muEssen: budiriro kubva pakutanga
Muna 1983 munyori wechinyorwa ichi aive nemakore maviri ekuberekwa. Mitambo yebhodhi yakanga isati yave nyaya, uye mutambo wemitambo wakanga usati wadaro. Izvi zvaizochinja anenge makore gumi gare gare - panguva iyoyo, SPIEL yakanga yagara ichiitirwa kuMesse Essen uye yave ichizivikanwa seInternational Game Days kwemakore. Chiitiko chekutanga: vanhu vakawanda, vanhu vakawanda vakareba, makumbo akawanda marefu, mitambo yakawanda. Pakanga paine (zvakawanda) zvekutariswa muhoro maererano nezviyero zvenguva iyoyo. Izvo hazvina kuchinja mumakore makumi mana apfuura. Kunyangwe nhasi, mazuva emitambo yepasirese ihodgepodge yematoyi - anonakidza, asi zvakare anonetesa. Hafu yevhiki yeSPIEL muEssen muna Gumiguru haisi zororo - iwe unoda zororo mushure.
Über 200.000 mafani akauya kune yekupedzisira yenguva dzose fair muna 2019. Pakanga pasati pave nekutaura nezvemamiriro epasi rose denda. Vashanyi vakaungana pamwe chete, sezvavanogara vachiita kana vari kunze uye vari mu "imba yavo yekutandarira". Icho chokwadi chekuti International Game Days ikozvino ndiyo huru yekutengeserana yepasi rose yemitambo yebhodhi, uye nekudaro yakatorova United States, iyo inozivikanwa neimwe nzira nekuda kwehukuru hwayo, inowanzo kanganwa uye kazhinji. Anenge makore 40 ekushanda nesimba akapinda muchiitiko chenyika. Iwo mahofisi makuru: Bonn. Pakutanga kweSPIEL, rakanga richiri guta guru remubatanidzwa.
SPIEL muEssen 2008: Chitarisiko cheT-shirts chetsananguro dzeKosmos sezviri pachena chisingaperi. Mufananidzo: Matěj Baťha | Rezinesi: CC BY-SA 3.0
Izvo zvese zvakatanga muna 1983 paine vanosvika makumi mana evashanyi: "Deutsche Spielertage" yaifanirwa kuve pipi yevaverengi vebhodhi mutambo wemagazini. "Musangano uyu waifanirwa kuitirwa muAmerican Club muno muBonn," anodaro Dominique Metzler, anga achitungamira Friedhelm Merz Verlag kubvira 1996. Nekuti vaverengi vaifanira kufanonyoresa panguva iyoyo, zvakakurumidza kuve pachena kuti nzvimbo yakasarudzwa yaizova diki zvakanyanya. Paidiwa plan B.
"Sezvo Friedhelm Merz aive nevakawanda vezvematongerwo enyika, akabvunza baba vedu vedunhu panguva iyoyo Johannes Rau kana kwaizove nenzvimbo yemahara kumwe kwaigona kutambira vanhu vanopfuura mazana manomwe nevaratidziri gumi nevaviri vakangotaura," anodaro Metzler. Aiva Ishe Meya weEssen, Peter Reuschenbach, akashuma. Akanga aita kuti Essen Adult Education Center iwanikwe kuna Friedhelm Merz kwekupera kwesvondo pasina muripo. Ipapo kwakauya WDR uye nemukurumbira waiita seusingafungidzirwe kwekutanga kwemusangano wevaverengi vanotamba. "Musangano wacho wakasvika pakuzivikanwa munyika yose kuburikidza netsamba yekusangana mumagazini yemangwanani yeWDR 700, iyo muverengi uye mutambi akashanda akasununguka ipapo," anoyeuka Dominique Metzler. Vanosvika zviuru zvishanu vanhu vanobva kuEssen neRuhrpott vakaita rwendo rwekuenda kuEssen kwemazuva matatu.
70 vatapi venhau uye mutarisiri runhare
Mutambo mukuru webhodhi wepasi rose wakazvarwa, asi hapana aiziva izvozvo panguva iyoyo. Kwapera gore, muna 1984, zvinofanira kujeka kuti kufarira mitambo yebhodhi kwakakura sei. Zvakare "zvakanaka", zvakare munzvimbo yedzidzo yevakuru. Panguva ino kunyange ne "Marketing". Dominique Metzler anoti: "Chikwangwani chiduku chakadhindwa uye musangano wevatori venhau nemapepanhau enharaunda yeRuhr wakarongwa pachine nguva." Indasitiri yemitambo yakange yave nenguva yawana ruzivo rwechiitiko ichi chakabudirira zvakanyanya mumoyo wenzvimbo yeRuhr. 66 varatidziri vakatora chikamu, muchikoro chichangobva kuwedzerwa chakabatana pakanga paine nzvimbo yakawanda yevatori vechikamu.
Panguva ino yakanga isisiri tsamba yekugadzwa muWDR iyo yakaita kutenderera. "Vatapi venhau vangangosvika makumi manomwe vakazara nefoni yemuchengeti chete iripo kuti vape mishumo yavo," anodaro Metzler nhasi. 70 vashanyi vakakonzera mhirizhonga mumigwagwa. Izvo zvichiripo nhasi - saka hazvisi zvese zvakachinja mumakore makumi mana eSPIEL. Chinhu chimwe, zvisinei, uye icho chakanga chiri chepasi: nzvimbo yedzidzo yevanhu vakuru yakanga ichiputika pamakumbo, uye nokuda kweramangwana vaifanira kuwana nzvimbo yakakura, anodaro Metzler. Essen's Lord Mayor panguva iyoyo akazviratidza zvakare: "Mumamiriro ezvinhu aya, Lord Mayor Peter Reuschenbach, aivewo Sachigaro weSupervisory Board yeMesse Essen, akakurudzira Friedhelm Merz kuti aende kuMesse Essen muna 15.000". Hapana ainyatsoda izvozvo nekuti iyo Spielertage yaisafanirwa kuve yakanaka panguva iyoyo. Asi, sezvinozivikanwa, zvinhu zvakashanduka zvakasiyana - mukutarisa: nerombo rakanaka!
Iri raive dambudziko rakakura, akadaro Dominique Metzler. "Hapana munhu anobva kuMerz Verlag aive neruzivo rwekutengeserana. Saka simudza maoko ako uende. Kudzidza nekuita." Zvakazotevera zvinopindirana pamwe chete neBonn sezvazvinoita munharaunda yeRuhr: Makumi emakore ekushanda nesimba.
"Rakanga riri basa rakaoma kwemakumi emakore akawanda kuita SPIEL zvayave nhasi - inotungamira kutengeserana pasi rose," akadaro Metzler anofara nhasi. “Kunyanya sezvo pakanga pasina chinhu chakadai semazuva ano akasiyana-siyana evaparidzi. Vaparidzi vadiki vazhinji vakakura kuburikidza neSPIEL ”. Indaneti? Pakanga pasina. Saka kana zvitoro zvepa online. Vaitengesa vakatarisana, kunyange mitambo yebhodhi. Iyo fairi yakagadziridzwa kuita injini yekutengesa iyo vaparidzi vakashandisa zvinoenderana. "Mazhinji edhisheni kubva kuvaparidzi vadiki akada kutengeswa chete kuSPIEL," akadaro Metzler. "Kuonekwa kwakabudirira kwekutengeserana kuSPIEL kwaiwanzoita sarudzo yekuenderera mberi nekuvapo kwevaratidziri vadiki ava". Mazuva emitambo yepasi rese saka ane mutoro wekubudirira kune vaparidzi vanozivikanwa nhasi: "Ndagara ndichifara zvakanyanya kuona kuti vaparidzi vadiki vakachinja sei kuva makambani epakati uye makuru mumakore apfuura," anodaro Dominique Metzler achifara.
Friedhelm Merz Verlag anoronga anofanira kunge akaita zvakawanda chaizvo neSPIEL mumakumi mashoma emakore apfuura. Saka chii chinonzi mashiripiti kuseri kwefair? "Ndinogara ndichifunga kuti mashiripiti ndiwo aive mamiriro ekunze akasiyana paSPIEL", inopfupisa Dominique Metzler. “Nguva iyoyo apo muenzi anopinda muhoro kekutanga obva abatwa nehope. Zvakare kunzwa kwekuve pakati pevanhu vazhinji vane pfungwa dzakafanana vanogovana rudo rwebhodhi mutambo uye unogona kugara kunze muEssen. "
Pakave nezvakawanda zvakakosha zvemazuva emitambo yepasi rose mumakore makumi mana apfuura. Dominique Metzler aifanirwa kusarudza vashanu vavo - vatatu vacho vaive mumakore maviri apfuura. Zvinoshamisa, uye panguva imwechete chiratidzo chekukurumidza kukura kwechiitiko chacho, icho chakanga chakavakirwa pamagariro evanhu, chaifanira kutungamirirwa.
Iyo SPIEL muEssen muna 2007: Kare ikako kwaive nemachira etafura. Mufananidzo: Matěj Baťha | Rezinesi: CC BY-SA 3.0
"Kutama kubva panzvimbo yedzidzo yevakuru kuenda kunzvimbo yekuratidzira yeEssen, iyo pamusoro pezvose yaifanira kutsigirwa nemari", ndiyo yaive yekutanga chiitiko chikuru cheSPIEL, maererano naMetzler. “Rufu rwaFriedhelm Merz muna 1996 uye mutoro mukuru uyo ​​Rosemarie Geu neni takatakura tiri toga kubvira zvino zvichienda mberi,” anodaro Metzler, uyo akanga ane makore 33 okukura panguva iyoyo uye akatarisana “nedambudziko guru”. Zvino makore akapfuura uye kutengeserana kwakakura: muna 1998 pakanga pachine vashanyi vasingasviki 140.000 uye zvigadzirwa zvitsva mazana matatu - makore gumi nemashanu gare gare, nhamba yacho yakanga yakapetwa katatu. Nhasi varatidziri vanopa huwandu hwemazano emutambo 300. Nhamba yevashanyi yakawedzera kusvika pa1.500. Corona chete ndiyo yakakanganisa bhiri. Chimwe chiitiko chakakosha icho Dominique Metzler anotaura: "Kusikwa kweSPIEL.digital mumwedzi inenge mitatu chete muna 200.000". Yakanga isiri yemhando, asi nezvekuita kuseri kweimwe nzira iyi. Uyezve: "Kutangazve kwakabudirira kwazvo kweSPIEL 2020."
Nguva yekushungurudzika: "Chirongwa changu chekutsiva, icho chakatangwa gore rino nekutengesa kune toy fair", ndicho chiitiko chechishanu chemazuva emitambo yepasirese. Imwe yeakanyanya kukosha: yeakanaka, asiwo yaDominique Metzler pachezvake. Nezvikonzero zvezera, akange achida kuendesa SPIEL kumawoko matsva, Metzler akazivisa kuGerman press agency. Asi izvo hazviitiki nehusiku humwe: muBonn vanhu vanoramba vakabata maoko avo pamusoro peiyo fair. Chimiro, zvisinei, chachinja.
SPIEL: "yakaputika chaizvo mumakore achangopfuura"
Kungofanana nevagadziri veSPIEL uye yekutengeserana fair pachayo, vashanyi vakachinjawo kwemakumi emakore. "Sezvatotaurwa, chiitiko chave chakasiyana zvachose," anodaro Dominique Metzler. “Vaparidzi vakawanda vakabuda mumakumi emakore apfuura. Kupfuura zvese, vaparidzi vanoshandira kazhinji vatambi ”. Hazvina kumboitika nekusimba uku. "Zvishoma nezvishoma indasitiri yakawedzera kuwedzera kune dzimwe nyika."
Nhasi, vaparidzi vanenge vachingotengesa mutambo wakabudirira kune dzimwe nyika dzakawanda, zvakare, maererano naMetzler. Vatsikisi vemitambo vakapararirawo pasi rose. Izvi zvakazoratidzwa paSPIEL. "Uye saka iyo fairi yakaputika chaizvo mumakore mashoma apfuura."
Nenzira, Dominique Metzler anoratidza kuti yakawanda sei mitambo yebhodhi inoratidzira nzanga nemuenzaniso wakapfava: "Pandakatarisa muhoro dzekuratidzira makore makumi matatu apfuura, ndakaona kazhinji vashanyi vechirume pakati pe30 ne40 yemakore". Nhasi zvakasiyana zvachose. Chimiro chevashanyi chave chakanyanya kujeka. “Unoona kunyanya vechidiki. Vakadzi nevarume, asiwo mhuri dzine vana vavo. Uye izvo zvinoratidza kuti kutamba kwave chikamu chenzanga. " Mitambo chimbo "chinotibatanidza - mutsika uye nezvizvarwa". Metzler: "Chionioni chakakosha chenzanga yedu."
Kuchengetedza girazi kupenya ikozvino zvishoma nezvishoma kuve basa rechizvarwa chinotevera. The process yakaziviswa na Kutora kweFriedhelm Merz Verlag neNürnberg Spielwarenmesse eG kare. Asi: Metzler nechikwata chake muBonn vanoramba vachironga, ramba wakamirira kuumba hunhu hwemazuva emutambo wepasirese - kudzamara vamwe vatora masimba pane imwe nguva. Dominique Metzler, zvino ari pamudyandigere wakakodzera, anotoziva kuti "wake" kutengeserana kuri mumaoko akanaka. Chero zvichaitika mumakore 40 anotevera, kutarisisa bhora rekristaro kunozivisa kuti: “SPIEL icharamba ichikura mune ramangwana. Pamusoro pazvose, ini ndinoona yakatokura kutengeserana fair icharamba ichikura ”, anodaro Metzler.
Iwo International Game Days ane mukana unotevera wekuita izvi kubva Gumiguru 6 kusvika 9, 2022 - muEssen, hongu.
Mankomania cult game by HUCH! * 20,00 EUR tenga
Kare SciFi dhirama "Tales Kubva kuLoop": Bhodhi mutambo uri kutengeswa
Inotevera PUGB: Tamba Nzvimbo dzekurwira mahara: Ikozvino
Pegasus inounza Kuala adventure cartoon mutambo uye puzzle inonakidza
HeroQuest Legacies: mutambo wegomba unokambaira urikudzoka here?
Mitambo yebhodhi paKickstarter: Boom gore 2020 inogadzira huwandu hwerekodhi